काठमाण्डौ । नेपाल सरकारका तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले १० अर्ब रुपैयाँको विकास ऋणपत्र २०८१ ‘च’ जारी गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले जेठ १३ गते २ वर्षे अवधिको विकास ऋणपत्र जारी गर्ने भएको हो। यो ऋणपत्र भोलि जेठ १२ गते बोलकबोलमार्फत बिक्री गरिनेछ। यो ऋणपत्रमा इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैरबैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित...
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालकमा चिन्तामणि शिवाकोटी र डा. शंकर आचार्य नियुक्त भएका छन्। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शिवाकोटी र आचार्यलाई राष्ट्र बैंकको सञ्चालकमा नियुक्त गरेको हो। शिवाकोटी यसअघिका डेपुटी गभर्नर हुन्। उनी यसअघि गभर्नरमा पनि सिफारिस भएका थिए। आचार्य नेपाल राष्ट्र बैंककै पूर्वकार्यकारी...
सरकारले रु. ३ अर्ब बढीको ‘नागरिक बचतपत्र’ बिक्री गर्ने, ११% ब्याज पाइने
काठमाण्डौ । नेपाल सरकारका तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले यही जेठ १२ गतेबाट नागरिक बचतपत्र–२०८४ बिक्री गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले रु. ३ अर्ब ३ करोड ६ लाख ६० हजार रुपैयाँको नागरिक बचतपत्र बिक्री गर्न लागेको हो। यो बचतपत्र इच्छुक नेपाली नागरिकले मात्र खरिद गर्न पाउनेछन्। यो बचतपत्रमा लगानीकर्ताहरुले वार्षिक ११ प्रतिशत ब्याज...
रु. २७.२० अर्बको ट्रेजरी बिल जारी गर्दै राष्ट्र बैंक, आज बोलकबोल
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज जेठ ९ गते (सोमबार) २७ अर्ब २० करोड ३२ लाख रुपैयाँको ट्रेजरी बिलको बोलकबोल गर्ने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले जेठ १० गते जारी गर्न लागेको २८ दिने, ९१ दिने, १८२ दिने र ३६४ दिने ट्रेजरी बिलको बोलकबोल आज गर्ने भएको हो। राष्ट्र बैंकले २८ दिनका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ ट्रेजरी बिल जारी गर्दैछ। यो ट्रेजरी बिल आउँदो असार ७...
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले व्यापार घाटामा सुधार नआएसम्म तरलताको अभाव रहिरहने बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आइतबार आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले बैंकबाट गएको तरलता वस्तु खरिदका लागि विदेशिएपछि मुलुकमा समस्या बढ्ने बताएका हुन्। ‘मुलुकभित्र लगानी गरिएको पैसा...